Tanjona ny hanatsarana ny fahasalamam-bahoaka, indrindra ireo zaza. 500 amin’ireo 2.660 tobim-pahasalamana anatin’ny distrika 77 manerana an’i Madagasikara no hisitraka fitaovam-pangatsiahana mandeha amin’ny herin’ny masoandro hanamafisana ireo dingana fitehirizana vaksiny amin’ny maripana tokony ho izy. Sarotra amin’ireo tobim-pahasalamana sasany ny manatanteraka ny fanaovam-baksiny noho ny tsy fisiana angovo. Izany indrindra no hiandraketan’ny UNICEF hividy ireo fitaovana ireo miampy ny fanaterana izany eny ifotony sy ny fanofanana ireo mpiasan’ny fahasalamana. Mitotaly 4 500 000 tapitrisa dolara ny tombam-bidin’ireo fitaovana ireo ary ny GAVI no hiantsoroka ny 80%-n’ny famatsiam-bola.